१५ बर्षीय बुबाको ५ बर्षीय छोरा ! - Nepali Virals
१८ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १३:२१	540 पटक-पढिएको
नेपाल जस्तो पूर्वीय समाजमा समेत अहिले बालबिबाह बन्देज छ । ‘बिहावारी २० बर्ष पारी’ भन्ने भनाई नै छ । भने पश्चिमा मुलुकमा बालबिबाह निकै कडाइ छ । यस्तो अबस्थामा १५ बर्षीय व्यक्तिको ५ बर्षीय छोरा कसरी सम्भब भयो होला ? यो कुनै कागजी मिस्टेक पनि होइन न त लुकिछिपी गरिएको बिबाह नै ।
अझ बिडम्बना त के छ भने उनीहरुको फोटो हेर्दा उमेर निकै घर्कीसकेको देखिन्छ । न त बुबाको उमेर १५ बर्ष जस्तो देखिन्छ न त छोरा नै ५ बर्ष जस्तो देखिन्छ तर भै दियो यस्तै । अहिले बुबाले १५ औ बर्थ डे मनाएका छन् भने छोराले ५ औ बर्थ डे मनाएका छन् । खास कुरा के हो त ?
फोटो हेर्नुस, बुबाको तालु खुइलीसकेको छ, छोराको झ्याउसरी कपाल छ । बुबाको भुडी फुलेको छ भने छोरा ह्यान्डसम देखिन्छ । अनि अब कसरी पत्याउने कि यी बाउछोराको उमेर १५ र ५ बर्ष भनेर ? अन्दाज गर्ने हो भने बुबाको उमेर ५५ बर्ष आसपास हुनुपर्छ भने छोराको उमेर १६ बर्ष भन्दा माथि नै हुनुपर्छ । धेरैलाई यस्तै लाग्छ । फोटो हेर्दै यस्तो छ भने कसरी गलत लेख्न सकेका पनि भन्दै होलान कतिपयले । तर खास कुरा भनेर रमाइलो छ जुन थाहा पाउनु भएपछि तपाई तिनछक पर्नु हुनेछ ।
क्यालिफोर्नियाका यी बाउछोरा इरानी नागरिक हुन् । बुबाको नाम फ्रेड शेकुफ हुन् भने छोराको नाम एरिक हुन् । यी बाउछोराको जन्मदिन हो २९ फेब्रुअरी । यसलाई लिप एअर मानिन्छ अर्थात २९ फेब्रुअरी हरेक ४ बर्षमा मात्र आउछ । यो बर्ष बुबा चाहिले ६० बर्षको १५ औ जन्मदिन मनाएका छन् भने २० बर्षीय छोराले ५ औ जन्मदिन मनाएका छन् ।
अमेरिका जानुपूर्व फ्रेडलाई आफ्नो जन्मदिनको ’boutमा समेत थाहा थिएन । जब सन् १९७९ मा उनी अमेरिका पुगे तब अध्यागम अधिकारीले यस ’boutमा खोजतलास गरेपछि मात्र उनलाई चासो लागेको हो । यस्तो संयोगले छोरा एरिक पनि अचम्मित छन् । एकिन तथ्यांक नभए पनि बिश्वका करिब २१ लाख भन्दा बढी मान्छेको यस्तै संयोग हुने गरेको छ जसले जन्मदिन मनाउन ४ बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
हिजो (सोमबार) २९ फेब्रुअरी जन्मदिन मनाएकाहरुले अबको ४ बर्षपछि मात्र जन्मदिन मनाउन पाउछन । अन्यथा फेब्रुअरी महिना सधै २८ दिनको मात्रै हुन्छ । तर नेपालीहरुलाई भने यसले खासै अर्थ राख्दैन जसले नेपाली मितिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर अंग्रेजीलाई मात्रै ख्याल गर्नेहरुलाई भने आफ्नो जन्मदिन नै कहिले हो भनेर नेपाली मिती पत्ता लगाउन सकस पर्ने पक्का छ ।
अघिल्लो बिश्वास नै गर्न नसकिने अनौठो तर ध्रुबसत्य १० रोचक तथ्य
पछिल्लो विश्वकै सस्तो स्मार्टफोन: २५१ मा बेच्दा पनि ३१ रुपैया नाफा कसरी ? (पढ्नुहोस ३ कारण)